ITire Pyrolysis, Plastic Pyrolysis, Oil Sludge Pyrolysis, Rubber Pyrolysis - NIutech
90% ikuwe e Pyrolysis Imboni
China National Inqubekela Award Isayensi nobuchwepheshe
Ezingaphezu kwezingu-60 Domestic Patent & 10+ International PCT
Niutech Imvelo Technology Corporation, wathandwa Chinese National Science & Technology Inqubekela Award, iyona drafter Chinese National Standard; Le nkampani njalo seliphindeke izikhathi ezingaphezu 60x patent ukugunyazwa jikelele akwezinye ngaphansi isicelo.
Niutech iyona ibhizinisi okuholela ukuthi ezikhethekile imfucumfucu polymer (scrap amathayi, imfucuza zepulasitiki, uwoyela kodaka njll) okuqhubekayo Pyrolysis ubuchwepheshe-R & D, izinga okusezingeni imishini womshini kanye imikhiqizo yokuthengisa. Lonke Pyrolysis isitshalo isebenza ngaphansi kwezimo ephephile futhi imvelo-friendly kuhambisana EU EEA ne-US Epa amazinga.
Nge oluvelele nezobuchwepheshe ithimba, Niutech unremittingly ngcono imishini yayo ubuchwepheshe engaphezu kwengu-30, ukuze ahlinzeke isixazululo esingcono kakhulu futhi olunzulu amaklayenti. Niutech izitshalo Pyrolysis okuqhubekayo isifakiwe ngempumelelo futhi eziqhutshwa ngokukhangisa Europe, Asia le Melika, wazuza izinzuzo zomnotho, zezenhlalo nezemvelo amaklayenti kahle kakhulu.
Industrial Okuqhubekayo Ukusingathwa iTire Pyrolysis Production Line
lokho thina kwenziwe